Mareykanka oo xoojiyay go’aankiisa uu ciidanka ugala baxaayo Soomaaliya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Mareykanka oo xoojiyay go’aankiisa uu ciidanka ugala baxaayo Soomaaliya
Mareykanka oo xoojiyay go’aankiisa uu ciidanka ugala baxaayo Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay in ciidankeeda ay kala baxayso Soomaaliya ka dib markii ay sheegtay in isbadal weyn ay ku sameysay Ciidanka kaga sugan Qaaradda Afrika iyo sidoo kale Yurub oo mareykanka u sameeyay hal talis.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in fulinta qorshahaan ay qaadan doonto waqti iyo dib u eegis.
Ciidanka Mareykanka waxay ku dhawaaqeen xoojinta Ciidamada Mareykanka ee Yurub iyo Ciidanka Mareykanka ee Afrika oo loo magacaabay taliye cusub loona bixiyay magaca cusub ee (USAREUR-AF).
Gen. Christopher G. Cavoli oo dhowaan loo dalacsiiyay taliyaha USAREUR-AF ayaa sheegay in uu dardargalin doono fulinta amarka madaxda Mareykanka ee ah soo bixinta ciidanka kaga sugan Soomaaliya.
Gen. Christopher G. Cavoli ayaa sidoo kale muujiyay muhiimada ay leeyihiin ciidanka mareykanka ee ku sugan Soomaaliya, isagoo sheegay in qorshahaan uu ahaan doono mid aan ku dhicin si deg deg ah hal mar.